22 askari oo ku dhintay dagaal dhexmaray Labada Sudan iyo Qorsheyaasha Dahsoon ee reer Galbeedku ka leeyahay | Berberanews.com
Home WARARKA 22 askari oo ku dhintay dagaal dhexmaray Labada Sudan iyo Qorsheyaasha Dahsoon...
22 askari oo ku dhintay dagaal dhexmaray Labada Sudan iyo Qorsheyaasha Dahsoon ee reer Galbeedku ka leeyahay
Sudan-(Berberanews)-22 askari, ayaa ku dhintay dagaal dhexmaray Sudan iyo Koonfurta Sudan oo dhawaan madaxbannaani ka qaadatay Khartuum, ka dib markii iska hor imaad ciidan ku dhexmaray goob salliida qani ku ah oo lagu magacaabo Heglig.
Sida ay sheegeen wararka ka soo baxay dagaalka ciidammaddu waxay ku dhinteen dagaal maanta ku dhexmaray ciidammada labada Sudan Webi ku yaalla xuduudka ay ku muransanyihiin oo u dhaw magaalada Meiram.
Xiisadda labada Sudan oo muddooyinkii u danbeeyay cirka isku shareertay ka dib markii ciidammadda Koonfurtu qabsadeen magaalada salliida ee Heglig todobaadkii hore.
Koonfurta Sudan oo madaxbannaaneeda ka qaadatay Sudan 09, July, 2011, ka dib khilaaf muddo dheer soo jiitamayay oo u dhexeeyay Waqooyiga.
khubaro dhinaca siyaasadda falanqeeya, ayaa aaminsan fikirka madaxbannaanida Koonfurta Sudan inay ka danbeeyaan dalalka reer Galbeedku oo hunguri ka galay shiidaalka ku duugan Sudan, si uu qorshahaasi ugu suurtagalana ka caawinaya koonfurtu inay dagaal la gasho waqooyiga, ka dibna ay ka faa’iidaystaan dhulka salliida qaniga ku ah ee Sudan.
Previous articleMuqdisho : Nin sheegtay inuu ciidammadda dawladda ka tirsanyahay oo qarax ka fuliyay afaafka Cisbitaalka Mandina
Next articleKhatarta Qarsoon ee ay leedahay Sunta dilaaga ah ee ka dhalata Hoodhinta Hargaha iyo saammaynta bulshada Deegaanka Dacarbudhuq